အားကစားဝါသနာရှင်တွေအတွက်အသုံးတည့်မယ့် app တစ်ခုဖြစ်တဲ့ mStream! – AsiaApps
February 14, 2018 WilliamReviewsNo Comment on အားကစားဝါသနာရှင်တွေအတွက်အသုံးတည့်မယ့် app တစ်ခုဖြစ်တဲ့ mStream!
mStream ဟာဆိုရင်တော့အားကစားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီ ဖော်ပြပေးမယ့် application တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက Developer တွေဖန်တီးထားတာဖြစ်တာကြောင့် mStream မှာအဓိကမြင်တွေ့ရမယ့် သတင်းတွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကအားကစားသတင်းတွေပဲဖြစ်နေမှာပါ။
အားကစားအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး mStream စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မှုကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။ mStream app ထဲကိုစစချင်းဝင်လိုက်ရင် English နဲ့ မြန်မာ ဆိုပြီးရွေးချယ်နိုင်တဲ့ Option နှစ်ခုပေးမှာပါ။ အဲ့ဒီအဆင့်ပြီးရင်တော့ Home, Event နဲ့ Library ဆိုပြီး Page ၃ ခုပါဝင်တဲ့ mStream ထဲရောက်သွားပါပြီ။ Home ကလွဲပြီး Event နဲ့ Library မှာ Category ဆိုတဲ့ Option တစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ Category ထဲမှာ လက်ဝှေ့၊ ဘောလုံး၊ MMA (Mixed Martial Arts)၊ အင်တာဗျုး၊ နဲ့ အခြား အစရှိတဲ့ mStream မှာပြသမယ့် အားကစားအမျိုးအစားတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး မိမိစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
Home page ထဲမှာတော့ mStream မှာပြသမယ့် အားကစားပေါင်းစုံရဲ့ replay တွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး Event မှာတော့ မကြာခင်လာမယ့်အားကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုဖော်ပြပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Library page မှာတော့ Home page ကအတိုင်းပဲ replay တွေတင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Home page နဲ့ Library page တို့ရဲ့ကွာခြားချက်ကတော့ Category ပါဝင်တာနဲ့ မပါဝင်တာပါ။
ဖုန်းလေးတစ်လုံးနဲ့ အင်တာနက်လိုင်းရှိရုံနဲ့ အားကစားသတင်းတွေကိုသိရှိနိုင်ပြီဖြစ်တာကြောင့် တော်တော်လေးဟန်ကျပါတယ်။ Android နဲ့ IOS Platform နှစ်မျိုးလုံးမှာ အခမဲ့ Download ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အားကစားသတင်းတွေကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပြီဖြစ်တာကြောင့် မိတ်ဆွေအားအသိပေးလိုက်ပါတယ်။
Image Source : mStream